Fivondronamben’ny Eveka : « Tsy mahita modely tsara hotahafina ireo tanora »
samedi, 18 mai 2019 09:50
Nahatsapa ireto lesoka eto amin’ny firenena na sosialy na politika na toekarena ny Fivondronamben'ny Eveka nandritra ny fivoriambe nataon’izy ireto teto Antananarivo ny 08 ka hatramin’ny 16 mey 2019, ka nilaza tamin’ny hafatra fa :
Na mameno trano Fiangonana aza ny Kristianina dia tsapa fa tsy mbola mafy orina ny finoana ka mihena ny fandraisana Sakramenta. Tsy tafita ny fandalinam-pinoana.
Ny fiaraha-monina mikorontana, samy mitady ny ho azy, ny fiainana lafo vidy, ny kolikoly lasa fomba amam-panao, ny fitsarana lasa gaboraraka, tafahoatra ny vono olona etsy sy eroa; tsy mbola mandry fahalemana ny tany na dia eo aza ny ezaka lehibe iarahan’ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka. Misara-bazana ny fianakaviana.
Ireo tanora tsy mahita modely tsara hotahafina ka mora voasariky ny rendrarendra samihafa, mivarilavo amin’ny zava-mahadomelina, tsy manaja ny soatoavina, tsy mahafola-tena hilofo hiasa ka « mitady tany malemy hanorenam-pangady ».
Lasa toa fahazarana ny manao fampanantenana poak’aty sy ny fanaovana politika mampisara-bazana ny mpiray tanindrazana indraindray, ary ny fomba fiasa koa matetika toa tsy ahatsapana ny tena fitiavan-tanindrazana marina… fahazaran-dratsy manangona ny ho an’ny tena no hita fa tsy mitsinjo ny soa iombonana.
Mibaribary ny fahasimban’ny soatoavina sy ny hasina maha-olona ary indrindra ny “Tranobe iombonana” eto Madagasikara.
Hararaotintsika ny fahasoavana omen’Andriamanitra antsika, indrindra amin’izao hamangian’i Papa Fransoa an’i Madagasikara izao hanarenantsika ireo lesoka ireo, hoy ny hafatra.